Xukuumadda Soomaaliya oo beenisay War kasoo yeeray Xasan Cali Kheyre - Awdinle Online
Xukuumadda Soomaaliya oo beenisay War kasoo yeeray Xasan Cali Kheyre
Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Xukuumadda Soomaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay hadal dhawaan ka soo yeeray RW hore ee dalka Xassan Cali Kheyre oo ahaa in dowladaha qaar ay lacagihii taageerada ahaa ka goosteen dowladda sababo la xiriira muranka doorashada.
Wasiir Beyle waxaa uu sheegay in hdowrkii bilood ee la soo dhaafay dowlado dhowr ah oo ka tirsan Yurub iyo Afrika ay dowladda Soomaliya sitoos ah u soo garsiiyeen lacago farabadan.
Waxaa uu sheegay in sidoo kale marka la gaaro sanadka cusub ee 2021 ay jiran dowlado Soomaliya u balan qaaday lacago dhowr ah, isla markaana warraka la faafiyay ay yihiin kuwo aan waxba ka jirin.
Hadalka Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Xukuumadda Soomaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli weli muran uu ka taagan yahay doorashada Soomaaliya, isla markaana dowladdaha taageera Soomaliya ay saamileydsa siyaasadeed ku cadaadinayaan in xal laga gaaro khilafka doorashada.
Previous articleQaar kamid ah Midowga Musharixiinta oo ku wajahan Magaalada Garoowe
Next articleGuddoomiye Gobol oo sheegay in qofkii la heshiiya Al-Shabaab ay tooganayaan